1080p – Quality – Alpha Premium
Monster Hunter: Legends of the Guild (2021) ##unicode အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ video game ကိုအခြေခံပြီး animated movieအဖြစ် ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် အေဒင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ လူသားတွေနဲ့ Monstersတွေ ယှဉ်တွဲနေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးက သူ့ရွာလေးကို စောင့်ရှောက်နေသူတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့မှာတော့ monster အမဲလိုက်မုဆိုးတစ်ယောက် သူ့ရွာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ် Monsterတွေထဲမှာ အန္တရာယ်အများဆုံး ရှေးအကျဆုံးနဂါးကြီးဟာ အသိုက်ပြောင်းဖို့ သူတို့ရွာကိုဖြတ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ရွာသားတွေ လွတ်ရာပြေးဖို့ အချိန်လည်းမရှိခဲ့ပါဘူး အေဒင်ကတော့ ဒီနဂါးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ် နောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့အခါအမဲလိုက်မုဆိုးတွေနဲ့အေဒင်ပေါင်းစည်းပြီး ဒီနဂါးကြီးကို ဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတာကြည့်ရူရမဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi အခုတင္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့ ဇာတ္ကားကေတာ့ video game ကိုအေျခခံၿပီး animated movieအျဖစ္ ျပန္လည္႐ိုက္ကူးထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ေအဒင္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဟာ လူသားေတြနဲ႔ Monstersေတြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္တဲ့ ကမာၻႀကီးက သူ႔႐ြာေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသူတစ္ေယာက္ပါ တစ္ေန႔မွာေတာ့ monster အမဲလိုက္မုဆိုးတစ္ေယာက္ သူ႔႐ြာကိုေရာက္လာခဲ့ပါတယ္ Monsterေတြထဲမွာ အႏၲရာယ္အမ်ားဆုံး ေရွးအက်ဆုံးနဂါးႀကီးဟာ အသိုက္ေျပာင္းဖို႔ သူတို႔႐ြာကိုျဖတ္ေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ႐ြာသားေတြ လြတ္ရာေျပးဖို႔ အခ်ိန္လည္းမရွိခဲ့ပါဘူး ေအဒင္ကေတာ့ ဒီနဂါးႀကီးနဲ႔ရင္ဆိုင္ဖို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္ ေနာက္ဆုံးေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့တဲ့အခါအမဲလိုက္မုဆိုးေတြနဲ႔ေအဒင္ေပါင္းစည္းၿပီး ဒီနဂါးႀကီးကို ဘယ္လိုတားဆီးမလဲဆိုတာၾကည့္႐ူရမဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္လို႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Review – Hmue File Size – 850MB Format…mp4 Quality : 1080p ...
Dial 100 (2021) ##unicode ဒီတစ်ခါကတော့ ဇာတ်လမ်းကြည့်ရင်း ကိုယ်တိုင်လိုက်စဉ်းစားပြီး စိတ်လှုပ်ရှားရစေမယ့် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကတော့ နစ်ဟေးက အရေးပေါ်ဖုန်း ၁၀၀ ကိုဆက်ရင်ရောက်သွားမယ့် မွမ်ဘိုင်းအရေးပေါ်ထိန်းချုပ်ခန်းက ရဲအရာရှိတစ်ယောက်။ ပြောရရင်တော့ လက်ဖျားငွေသီးတဲ့ဌာနမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့။ သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လည်း အလုပ်တာဝန်ကျေပွန်ရင်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်းပဲနေခဲ့တယ်။ သူ့မှာဇနီးသည်ရယ်၊ တစ်ဦးတည်းသောသားလေးတစ်ယောက်ရယ်ရှိတယ်။ မိုးတွေအရမ်းကြီးတဲ့တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့အရေးပေါ်ထိန်းချုပ်ခန်းကိုဖုန်းတစ်ခုဝင်လာတယ်။ ဖုန်းထဲကအမျိုးသမီးက သတ်သေချင်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြောရင်းငိုယိုနေခဲ့တယ်။ နစ်ဟေးလည်း ကြိုးစားပြီးချော့မော့ဖြောင်းဖြပေမဲ့ ဘယ်လိုမှမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်တော့ဖုန်းကျသွားရော။ နောက်ဆုံးကျတော့မှ ဒီအမျိုးသမီးက သူ့မိသားစုနဲ့ သူ့ရဲ့အရာရာတိုင်းကို ဖျက်စီးပစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားမှန်း သိလာရတဲ့အခါ နစ်ဟေးတစ်ယောက် ပဟေဠိဆန်တဲ့အမျိုးသမီးလက်ကနေ မိသားစုကိုကယ်တင်နိုင်ဦးမှာလား၊ ဒီအမျိုးသမီးကရော ဘာအကြောင်းကြောင့် နစ်ဟေးရဲ့မိသားစုကို ဒုက္ခပေးချင်ရတာလဲ ဆိုတာတွေကိုတော့ ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါကေတာ့ ဇာတ္လမ္းၾကည့္ရင္း ကိုယ္တိုင္လိုက္စဥ္းစားၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားရေစမယ့္ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ဇာတ္လမ္းပုံစံေလးကေတာ့ နစ္ေဟးက အေရးေပၚဖုန္း ၁၀၀ ကိုဆက္ရင္ေရာက္သြားမယ့္ မြမ္ဘိုင္းအေရးေပၚထိန္းခ်ဳပ္ခန္းက ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္။ ေျပာရရင္ေတာ့ လက္ဖ်ားေငြသီးတဲ့ဌာနမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးေပါ့။ သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လည္း အလုပ္တာဝန္ေက်ပြန္ရင္း သန႔္သန႔္ရွင္းရွင္းပဲေနခဲ့တယ္။ သူ႔မွာဇနီးသည္ရယ္၊ တစ္ဦးတည္းေသာသားေလးတစ္ေယာက္ရယ္ရွိတယ္။ မိုးေတြအရမ္းႀကီးတဲ့တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူတို႔အေရးေပၚထိန္းခ်ဳပ္ခန္းကိုဖုန္းတစ္ခုဝင္လာတယ္။ ဖုန္းထဲကအမ်ိဳးသမီးက သတ္ေသခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီး ေျပာရင္းငိုယိုေနခဲ့တယ္။ နစ္ေဟးလည္း ႀကိဳးစားၿပီးေခ်ာ့ေမာ့ေျဖာင္းျဖေပမဲ့ ဘယ္လိုမွမရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ေတာ့ဖုန္းက်သြားေရာ။ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့မွ ဒီအမ်ိဳးသမီးက သူ႔မိသားစုနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အရာရာတိုင္းကို ဖ်က္စီးပစ္ဖို႔ရည္႐ြယ္ထားမွန္း ...
IMDB: 6.7/10 2145 votes
Secret Magic Control Agency (2021) ##unicode Secrect Magic Control Agency ဇာတ်ကားမှာတော့ Hanselနဲ့ Gretelကမောင်နှမတွေဖြစ်ပေမဲ့ မတူညီတဲ့လမ်းကိုလျှောက်နေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။Gretelက တိုင်းပြည်ရဲ့ Secrect Magic Control Agencyမှာ အေးဂျင့်တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်နေကာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အတော်ဆုံးအေးဂျင့်ဖြစ်လာပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဆုံးသွားတဲ့မိဘတွေဂုဏ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ Hansalကတော့ လမ်းမှာဖျော်ဖြေပွဲတွေလုပ်ပြီး လူတွေဆီကပိုက်ဆံလိမ်စားနေတဲ့ မှော်ဆရာအတုပါ။ ရပ်တည်ချက်ချင်းမတူကြတဲ့ သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကို Secrect Magic Control Agencyခေါင်းဆောင်က ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရတဲ့ ဘုရင်ကြီးကို ရှာဖို့အတွက် တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မောင်နှမနှစ်ယောက်က အချင်းအချင်းမတည့်ကြပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် ဘုရင်ကြီးကိုရှာဖို့အတွက် အတူတူအလုပ်လုပ်ရပါတော့တယ်။စည်းကမ်းရှိပြီး တစ်ယောက်တည်းအလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ Gretelတစ်ယောက်နဲ့ ပေါက်ကရတွေနဲ့ပြသာနာတွေဘဲ ဖန်တီးတတ်တဲ့ Hanselတို့မောင်နှမ နှစ်ယောက်ဘုရင်ကြီးကို ရှာတွေ့ပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Secrect Magic Control Agency ဇာတ္ကားမွာေတာ့ Hanselနဲ႔ Gretelကေမာင္ႏွမေတြျဖစ္ေပမဲ့ မတူညီတဲ့လမ္းကိုေလွ်ာက္ေနၾကတဲ့လူေတြျဖစ္တယ္။Gretelက တိုင္းျပည္ရဲ႕ Secrect Magic Control Agencyမွာ ေအးဂ်င့္တစ္ေယာက္အျဖစ္ လုပ္ေနကာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေတာ္ဆုံးေအးဂ်င့္ျဖစ္လာၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဆုံးသြားတဲ့မိဘေတြဂုဏ္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ႀကိဳးစားေနသူျဖစ္ပါတယ္။ Hansalကေတာ့ လမ္းမွာေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြလုပ္ၿပီး လူေတြဆီကပိုက္ဆံလိမ္စားေနတဲ့ ေမွာ္ဆရာအတုပါ။ ရပ္တည္ခ်က္ခ်င္းမတူၾကတဲ့ သူတို႔ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ကို Secrect Magic Control Agencyေခါင္းေဆာင္က ျပန္ေပးဆြဲခံလိုက္ရတဲ့ ဘုရင္ႀကီးကို ရွာဖို႔အတြက္ တာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္က ...
400 Bullets (2021) ##unicode 2021ထွက်စစ်ကားသစ်လေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ကပ္ပတိန်နိုအာဟာ ဒုံးကျည်တွေနေရာပြောင်းရွေ့ဖို့အတွက် သူ့အဖွဲ့မဟုတ်တဲ့ လက်နက်တပ်ဆင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ခရီးနှင်လာပါတယ် ဒါပေမယ့်လမ်းတစ်ဝက်မှာ တာလီဗန်‌တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နိုအာတစ်ယောက်ပဲ အသက်ရှင်ပြီး ကျန်တဲ့သူအားလုံးကျသွားပါတယ် ဒါနဲ့နိုအာလဲ ဒုံးကျည်တွေကိုအဝေးထိန်းပြုလုပ်လို့ရတဲ့ Chips အပြားလေးတွေသယ်ပြီးလွတ်ရာကိုပြေးတယ် အနီးနားကစစ်စခန်းတစ်ခုကိုအကူအညီတောင်း‌ပါတယ် ကံဆိုးတော့ စစ်စခန်းမှာ အစောင့်စစ်သား၂ယောက်သာရှိတယ် အပစ်အခတ်များများနဲ့ တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းတဲ့စစ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ကြည့်ရှူလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi 2021ထြက္စစ္ကားသစ္ေလးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ကပၸတိန္နိုအာဟာ ဒုံးက်ည္ေတြေနရာေျပာင္းေရြ႕ဖို့အတြက္ သူ႔အဖြဲ႕မဟုတ္တဲ့ လက္နက္တပ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ ခရီးႏွင္လာပါတယ္ ဒါေပမယ့္လမ္းတစ္၀က္မွာ တာလီဗန္‌ေတြရဲ့တိုက္ခိုက္မွုေၾကာင့္ နိုအာတစ္ေယာက္ပဲ အသက္ရွင္ၿပီး က်န္တဲ့သူအားလုံးက်သြားပါတယ္ ဒါနဲ႔နိုအာလဲ ဒုံးက်ည္ေတြကိုအေဝးထိန္းျပဳလုပ္လို့ရတဲ့ Chips အျပားေလးေတြသယ္ၿပီးလြတ္ရာကိုေျပးတယ္ အနီးနားကစစ္စခန္းတစ္ခုကိုအကူအညီေတာင္း‌ပါတယ္ ကံဆိုးေတာ့ စစ္စခန္းမွာ အေစာင့္စစ္သား၂ေယာက္သာရွိတယ္ အပစ္အခတ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးၾကည့္ေကာင္းတဲ့စစ္ကားေလးျဖစ္ပါတယ္ ၾကည့္ရွူလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ review – ACP File Size – 1.2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Action, Crime Subtitle : Myanmar Subtitle (hardsub) Translated by ACP Encoded by Arrow
Tarung Sarung (2020) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်ကားကတော့ အင်ဒိုနီးရှားဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ သိုင်းအားကစားတစ်ခုရှိပါတယ် လုံချည်တစ်ကွင်းထဲမှာလူနှစ်ယောက်ဝင်ပြီး သိုင်းချတဲ့ ဆာရွန်သိုင်းချနည်းလို့ခေါ်တဲ့အားကစားတစ်ခုပါ ဒီကားမှာတော့ သိုင်းအားကစားနည်းကိုအခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းပါ ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒန်နီက ဂျာကာတာက ဆိုးသွမ်းတဲ့သူဌေးသားတစ်ယောက်ပါ သူ့အမေက သူ့ကိုလိမ္မာလာအောင် မာကာစတာမြို့ကိုပို့လိုက်ပါတယ် ဆာရွန်သိုင်းအားကစားက အဲဒီမြို့မှာပိုပြီးတော့ထင်ရှားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ ဒန်နီက တန်ရီဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီး တန်ရီကိုတော့ ဆာရွန်သိုင်းချန်ပီယံတစ်ယောက်က အတင်းလိုက်ကြိုက်နေတာပါ ဒီလိုနဲ့ ဒန်နီနဲ့ ဆာရွန်သိုင်းချန်ပီယံတို့ ပြဿနာတတ်ကြပါတော့တယ် ဒါကြောင့် ဒန်နီက ဆာရွန်သိုင်းသင်ပါတော့တယ် ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲကတော့ ဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါတော့..................... အရင်တုန်းက ကရာတေးဇာတ်ကားကောင်းတွေကြိုက်နှစ်ခြိုက်သူတွေ ဒီဇာတ်ကားလေးကိုလည်း ကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်တာမို့ ကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးအဖြစ် ညွှန်းပေးလိုက်ရပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္တင္ဆက္ေပးခ်င္တဲ့ဇာတ္ကားကေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားဇာတ္ကားေကာင္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ သိုင္းအားကစားတစ္ခုရွိပါတယ္ လုံခ်ည္တစ္ကြင္းထဲမွာလူႏွစ္ေယာက္၀င္ၿပီး သိုင္းခ်တဲ့ ဆာ႐ြန္သိုင္းခ်နည္းလို႔ေခၚတဲ့အားကစားတစ္ခုပါ ဒီကားမွာေတာ့ သိုင္းအားကစားနည္းကိုအေျခခံၿပီး ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းပါ ဇာတ္လမ္းကေတာ့ ဒန္နီက ဂ်ာကာတာက ဆိုးသြမ္းတဲ့သူေဌးသားတစ္ေယာက္ပါ သူ႔အေမက သူ႔ကိုလိမၼာလာေအာင္ မာကာစတာၿမိဳ႕ကိုပို႔လိုက္ပါတယ္ ဆာ႐ြန္သိုင္းအားကစားက အဲဒီၿမိဳ႕မွာပိုၿပီးေတာ့ထင္ရွားေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့ ဒန္နီက တန္ရီဆိုတဲ့ေကာင္မေလးနဲ႔ေတြ႕ခဲ့ျပီး တန္ရီကိုေတာ့ ဆာ႐ြန္သိုင္းခ်န္ပီယံတစ္ေယာက္က အတင္းလိုက္ႀကိဳက္ေနတာပါ ဒီလိုနဲ႔ ဒန္နီနဲ႔ ဆာ႐ြန္သိုင္းခ်န္ပီယံတို႔ ျပႆနာတတ္ၾကပါေတာ့တယ္ ဒါေၾကာင့္ ဒန္နီက ဆာ႐ြန္သိုင္းသင္ပါေတာ့တယ္ ဘယ္လိုေတြဆက္ျဖစ္ၾကမလဲကေတာ့ ဆက္ၾကည့္လိုက္ၾကပါေတာ့..................... အရင္တုန္းက ကရာေတးဇာတ္ကားေကာင္းေတြႀကိဳက္ႏွစ္ၿခိဳက္သူေတြ ဒီဇာတ္ကားေလးကိုလည္း ႀကိဳက္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္တာမို႔ ၾကည့္သင့္တဲ့ကားေလးအျဖစ္ ၫႊန္းေပးလိုက္ရပါတယ္ Review – Hmue File Size – 1.3GB Format…mp4 Quality ...
Rom (2019) ##unicode ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟိုချီမင်းမြို့တော်ရဲ့ ဆင်ခြေဖုံးအရပ်မှာ မိဘမဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့နာမည်ကရွမ်တဲ့။ သူကအဲ့ဆင်ခြေဖုံးအရပ်က တရားမဝင်ထီ(မြန်မာနိုင်ငံက ချဲတို့၊ နှစ်လုံးတို့လို)လုပ်ငန်းမှာ ကျင်လည်တယ်။ သူတို့လောကမှာက လောင်းတဲ့သူတွေရယ်၊ ကြားထဲကဒိုင်တွေရယ်၊ တကယ့်ဂေါင်သူဌေးကြီးရယ်ရှိတယ်။ ဒီလူတွေဟာအချင်းချင်းမမြင်ဖူးကြဘူး၊ သိလည်းမသိကြဘူး။ သူတို့ကိုကြားထဲက အဆက်အသွယ်လုပ်ပေးတာက ရွမ်တို့လိုကလေးတွေ။ ဘယ်သူကဘယ်ဂဏန်းကိုဘယ်လောက်ဖိုးထိုးမယ်ဆိုတာကို ရွမ်တို့ကဒိုင်တွေဆီသွားထိုးပေး၊ ဒိုင်တွေကမှတစ်ဆင့် သူဌေးတွေဆီပို့ပေးရတာ။ အဲ့လိုလုပ်ပေးရင်း ရွမ်တို့လည်းမုန့်ဖိုးလေးဘာလေးရပေါ့။ ပေါက်သွားရင်တော့ မုန့်ဖိုးမြိုးမြိုးမြတ်မြတ်လေးရတာပေါ့။ ရွမ်ကဒီလိုကြုံရာကျပန်းလုပ်နေရပေမဲ့ သူ့မှာအိပ်မက်တစ်ခုရှိတယ်။ သူ့မိဘတွေနဲ့ပြန်ဆုံစည်းဖို့။ တစ်နေ့မှာ သူ့မိဘတွေသူ့ကိုပြန်လာခေါ်မယ်လို့ပဲ ယုံကြည်ပြီးဘဝကိုရှေ့ဆက်နေတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူ့နယ်မြေကို လာလုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ရွမ်တစ်ယောက် သူ့ပိုက်ဆံရရာအလုပ်လေးကို ဆက်လုပ်နိုင်ဦးမလား။ သူ့မိဘတွေနဲ့ရော ပြန်ဆုံစည်းရမလား၊ လောင်းကစားက လူ့ဘဝတွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်နေလဲ ဆိုတာ‌တွေကို ကြည့်ရှုခံစားကြရမှာပါ ##zawgyi ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ဆင္ေျခဖုံးအရပ္မွာ မိဘမဲ့ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သူ႔နာမည္က႐ြမ္တဲ့။ သူကအဲ့ဆင္ေျခဖုံးအရပ္က တရားမဝင္ထီ(ျမန္မာႏိုင္ငံက ခ်ဲတို႔၊ ႏွစ္လုံးတို႔လို)လုပ္ငန္းမွာ က်င္လည္တယ္။ သူတို႔ေလာကမွာက ေလာင္းတဲ့သူေတြရယ္၊ ၾကားထဲကဒိုင္ေတြရယ္၊ တကယ့္ေဂါင္သူေဌးႀကီးရယ္ရွိတယ္။ ဒီလူေတြဟာအခ်င္းခ်င္းမျမင္ဖူးၾကဘူး၊ သိလည္းမသိၾကဘူး။ သူတို႔ကိုၾကားထဲက အဆက္အသြယ္လုပ္ေပးတာက ႐ြမ္တို႔လိုကေလးေတြ။ ဘယ္သူကဘယ္ဂဏန္းကိုဘယ္ေလာက္ဖိုးထိုးမယ္ဆိုတာကို ႐ြမ္တို႔ကဒိုင္ေတြဆီသြားထိုးေပး၊ ဒိုင္ေတြကမွတစ္ဆင့္ သူေဌးေတြဆီပို႔ေပးရတာ။ အဲ့လိုလုပ္ေပးရင္း ႐ြမ္တို႔လည္းမုန႔္ဖိုးေလးဘာေလးရေပါ့။ ေပါက္သြားရင္ေတာ့ မုန႔္ဖိုးၿမိဳးၿမိဳးျမတ္ျမတ္ေလးရတာေပါ့။ ႐ြမ္ကဒီလိုႀကဳံရာက်ပန္းလုပ္ေနရေပမဲ့ သူ႔မွာအိပ္မက္တစ္ခုရွိတယ္။ သူ႔မိဘေတြနဲ႔ျပန္ဆုံစည္းဖို႔။ တစ္ေန႔မွာ သူ႔မိဘေတြသူ႔ကိုျပန္လာေခၚမယ္လို႔ပဲ ယုံၾကည္ၿပီးဘဝကိုေရွ႕ဆက္ေနတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူ႔နယ္ေျမကို ...
Sister Sister (2019) ##unicode ကင်က "သန်းခေါင်ယံဝန်ခံချက်များ"ဆိုတဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ရဲ့ တင်ဆက်သူတစ်ယောက်ပါ သူ့အစီအစဉ်ကို အမ်ဂိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ဖုန်းဆက်ပြီးရင်ဖွင့်ရာကနေ သူတို့နှစ်ယောက်သိခဲ့ကြပြီး အမ်ဂိုင်ကကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ခိုကိုးရာမဲ့နေလို့ ကင်က သနားပြီး သူ့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ် ထို့နောက်မှာ အမ်ဂိုင်နဲ့ကင်နဲ့ အရမ်းကိုရင်းနှီးလာကြပါတော့တယ် ကင်မှာခင်ပွန်းရှိပါတယ် ကင်ကချမ်းသာလို့ယူထားတဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကအဆင်မပြေပါဘူး အမ်ဂိုင် သူ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ အမ်ဂိုင်ကလည်းအထာတွေပေးတော့ ကင်ရဲ့စိတ်တွေယိုင်လာပါတော့တယ် သူတို့နှစ်ယောက်ဇာတ်လမ်းဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ နောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုလျို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေလဲဆိုတာကိုတော့ ရင်ခုန်စွာနဲ့ကြည့်လိုက်ကြပါတော့နော် GL movie အမျိုးအစားထဲမှာလည်းပါဝင်ပြီး လှည့်ကွက်တွေအများကြီးနဲ့ကြည့်ရမှာဖြစ်လို့ အညွန်းကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ ကျန်တာကတော့ ဒေါင်းပြီးဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါ Drama /Thriller အမျိုးအစားမို့ ရသမျိုးစုံနဲ့ကြည့်ရူရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ကင္က "သန္းေခါင္ယံဝန္ခံခ်က္မ်ား"ဆိုတဲ့ေရဒီယိုအစီအစဥ္ရဲ႕ တင္ဆက္သူတစ္ေယာက္ပါ သူ႔အစီအစဥ္ကို အမ္ဂိုင္ဆိုတဲ့ေကာင္မေလးက ဖုန္းဆက္ၿပီးရင္ဖြင့္ရာကေန သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သိခဲ့ၾကျပီး အမ္ဂိုင္ကကိုယ္ဝန္ႀကီးနဲ႔ခိုကိုးရာမဲ့ေနလို႔ ကင္က သနားၿပီး သူ႔အိမ္ကိုေခၚလာခဲ့ပါတယ္ ထို႔ေနာက္မွာ အမ္ဂိုင္နဲ႔ကင္နဲ႔ အရမ္းကိုရင္းႏွီးလာၾကပါေတာ့တယ္ ကင္မွာခင္ပြန္းရွိပါတယ္ ကင္ကခ်မ္းသာလို႔ယူထားတဲ့ခင္ပြန္းျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးကအဆင္မေျပပါဘူး အမ္ဂိုင္ သူ႔အိမ္ကိုေရာက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အမ္ဂိုင္ကလည္းအထာေတြေပးေတာ့ ကင္ရဲ႕စိတ္ေတြယိုင္လာပါေတာ့တယ္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဇာတ္လမ္းဘယ္လိုေတြဆက္ျဖစ္မွာလဲ ေနာက္ကြယ္မွာဘယ္လိုလ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြရွိေနလဲဆိုတာကိုေတာ့ ရင္ခုန္စြာနဲ႔ၾကည့္လိုက္ၾကပါေတာ့ေနာ္ GL movie အမ်ိဳးအစားထဲမွာလည္းပါဝင္ၿပီး လွည့္ကြက္ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ၾကည့္ရမွာျဖစ္လို႔ အညြန္းကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ က်န္တာကေတာ့ ေဒါင္းျပီးဆက္ႀကည့္လိုက္ႀကပါ Drama /Thriller အမ်ိဳးအစားမို့ ရသမ်ိဳးစုံနဲ႔ၾကည့္႐ူရမယ့္ ဇာတ္ကားေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ Review – Hmue File Size – 1.3GB Format…mp4 Quality : 1080p ...
Collectors (2020) ##unicode ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ အရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး ငွေရှာနေတဲ့ ဂန်ဒုံဂူဆိုတဲ့ကောင်လေးက လှည့်တဲ့ပတ်တဲ့ ဈေးကစားတဲ့နေရာအကွက်ရွှေ့တာတွေမှာ တကယ်ကိုပါးပါးလျပ်လျပ်နဲ့ တော်ပါတယ် သူ့လက်ထဲ ရှိနေတဲ့ ရှေးဟောင်းဘုရားဆင်းတုတစ်ခုကို မျက်စိကျနေတာကတော့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှူအမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဖြစ်လဲ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကို တရားမဝင်အရောင်းအဝယ်လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ဘုရားဆင်းတုတစ်ခုအရောင်းအဝယ်ကနေ ချိတ်မိသွားပြီး နောက်ထပ် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရှာဖို့ပါ ဂန်ဒုံဂူကို ခိုင်းပါတော့တယ် အဲ့တာကို ဂန်ဒုံဂူတို့ဘက်ကလည်း ဖောက်တွင်းရေးဝိဇ္ဇာအကျော်အမော်တွေပါ ပူးပေါင်းပြီး ကိစ္စကြီးရင် ကြီးသလို ပြန်ညစ် ဘယ်လိုတွေ အကျပ်ကိုင် ဘယ်လိုတွေအကွက်ရွှေ့မလဲဆိုတာ ဇာတ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံး စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမယ့်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၿပီး ေငြရွာေနတဲ့ ဂန္ဒုံဂူဆိုတဲ့ေကာင္ေလးက လွည့္တဲ့ပတ္တဲ့ ေဈးကစားတဲ့ေနရာအကြက္ေ႐ႊ႕တာေတြမွာ တကယ္ကိုပါးပါးလ်ပ္လ်ပ္နဲ႔ ေတာ္ပါတယ္ သူ႔လက္ထဲ ရွိေနတဲ့ ေရွးေဟာင္းဘုရားဆင္းတုတစ္ခုကို မ်က္စိက်ေနတာကေတာ့ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႉအေမြအႏွစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ဥကၠ႒တစ္ျဖစ္လဲ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြကို တရားမဝင္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ဘုရားဆင္းတုတစ္ခုအေရာင္းအဝယ္ကေန ခ်ိတ္မိသြားၿပီး ေနာက္ထပ္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြရွာဖို႔ပါ ဂန္ဒုံဂူကို ခိုင္းပါေတာ့တယ္ အဲ့တာကို ဂန္ဒုံဂူတို႔ဘက္ကလည္း ေဖာက္တြင္းေရးဝိဇၨာအေက်ာ္အေမာ္ေတြပါ ပူးေပါင္းၿပီး ကိစၥႀကီးရင္ ႀကီးသလို ျပန္ညစ္ ဘယ္လိုေတြ အက်ပ္ကိုင္ ဘယ္လိုေတြအကြက္ေ႐ႊ႕မလဲဆိုတာ ဇာတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး စိတ္ဝင္တစားၾကည့္ရမယ့္ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ Review – Chuu Chuu File Size – 1.3GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre :Adventure, Crime Subtitle ...
Bullet (2021) နပန်းသမား‌ဟောင်း Sunny Leone ရဲ့ စီးရီးအသစ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အိန္ဒိယ Mini Series တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အနည်းအကျဉ်းပါတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့အတူ မကြည့်သင့်ပါဘူး... ဇာတ်ညွှန်းကတော့..... တီနာ နဲ့ လိုလိုဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ တီနာက ၀န်ကြီးရဲ့သားဆီက စပွန်ဆာ ယူထားတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ပေါ့ သူအောင်မြင်ချင်လို့ စပွန်ဆာယူခဲ့ရပေမယ့် ဒီလိုနေရတဲ့ဘ၀ကို သူသဘောမကျတော့ဘူး အဲ့ဒီတော့ ထွက်ပြေးဖို့ကြံတယ် ဘဲကြီးက သိသွားတော့ ဒေါသထွက်ပြီး တီနာကို လည်ပင်းညှစ်သတ်ဖို့ ကြံနေတဲ့အချိန်မှာ ဘေးခန်းမှာ ဒေတာတွေ လာခိုးနေတဲ့ လိုလိုက အမြင်မတော်တာနဲ့ ၀င်ကယ်ရင်း ၀န်ကြီးသားကို သတ်မိသွားရော အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီး သူတို့တွေ တောက်လျောက်ထွက်ပြေးရတော့တာပဲ ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကုန်မလဲ ဘာတွေ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူက ဘယ်လိုတွေ့ပြီး ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို သတ်သွားပြီး ဘယ်သူကအပြစ်မဲ့လဲဆိုတာကိုတော့..... [စာအရှင်ဖြစ်သည့်အတွက် MX Player , VLC Player တို့နှင့် စာဖော်၍ကြည့်ပါရန် ] Review – MVF File Size – 700 ...
IMDB: 2.8/10 127 votes
Maara (2021) IMDB 8.8 /10 Musical / Romance ##unicode လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာ Crush ( အရပ်အခေါ် ခွက် ) တစ်ယောက်တော့ရှိဖူးကြတာပါပဲ... လူပျို အပျိုဖြစ်လာတဲ့အချိန် ၊ ရင်ခုန်တတ်စ အရွယ်လေးမှာ ကိုယ်သိပ်ချစ်ခဲ့ရဖူးတဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိကိုရှိတယ်... ကျွန်တော်တို့တွေ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အဲ့ဒီ Crush ကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားကြတာပဲမလား... ငယ်စဉ်က သံယောဇဉ် ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ပဲပြောပြော ..... လောကဓံတွေကြားမှာ Crush က Crash ‌ဖြစ်သွားစမြဲပါပဲလေ..... ဒါပေမယ့် စာပို့သမားကြီး ဗယ်လိုင်ရန်အတွက်တော့ ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ... သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ က အချစ်ဦးကို နေ့တိုင်းလွမ်းနေတဲ့သူ.... မပေးလိုက်ရတဲ့ရည်းစားစာလေးတစ်စောင်နဲ့ .... ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အချစ်ဦးအပေါ် သစ္စာတည်တဲ့သူ... .သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး စာပို့သမားလုပ်ခဲ့တာကလည်း အချစ်ဦးကို ရှာဖွေဖို့..... "မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာ ပီတိတွေရောထားတဲ့ နာကျင်မှု" တဲ့.. မှန်ပါတယ်.... " မျှော်လင့်ခြင်း " ဆိုတာကိုခံစားဖူးတဲ့သူတွေမှသာ ဒီအဓိပ္ပါယ်ကို သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်... ဆိုတော့...... ဇာတ်ကွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ တေးသွားဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ကြောင်း... အားလပ်ရပ်မှာ မိသားစုနဲ့အတူ ကြည့်ရှုဖို့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ကြောင်း ...
IMDB: 7.9/10 820 votes
The Brand New Adventures of Aladin (Alad 2) (2018) ##unicode ဒီကားလေးကတော့ The New Adventures of Aladdin (2015) ရဲ့ဒုတိယမြောက်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားမှာတော့Vizerကို ဖမ်းမိပြီး Bagdadမြို့ရဲ့မင်းသားဖြစ်သွားတဲ့ Aladinတစ်ယောက်က နန်းတော်ထဲမှာနေရတာကိုငြီးငွေ့လာကာ တိုင်းရေးပြည်ရေးတွေလဲ စိတ်မဝင်စားတာကြောင့် မင်းသမီး Shaillaက စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ တိုင်းတစ်ပါးက မင်းသားတစ်ဦး Sha Zamanက Bagdadမြို့ကိုရောက်လာပြီးတော့ မြို့ကိုသိမ်းယူပြီး မင်းသမီး Shaillaရဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက် Aladinကို လိုက်လံသတ်ဖြတ်တော့တယ်။ Aladinတစ်ယောက် မြို့နဲ့မင်းသမီးကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက် လူသားဖြစိသွားတဲ့ မီးခွက်စောင့်ဘီလူးကို လိုက်လံရှာဖွေရပါတော့တယ်။လူဖြစ်ရတာကို သဘောကျနေတဲ့မီးခွက်စောင့်ဘီလူးကို ပြန်လည်သိမ်းသွင်းပြီး မင်းသား Sha Zamanနဲ့တိုက်ခိုက်တာ မင်းသမီးကိုပြန်လည် ပိုင်ဆိုင်နိုင်မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi ဒီကားေလးကေတာ့ The New Adventures of Aladdin (2015) ရဲ႕ဒုတိယေျမာက္ကားေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကားမွာေတာ့Vizerကို ဖမ္းမိၿပီး Bagdad​ၿမိဳ႕ရဲ႕မင္းသားျဖစ္သြားတဲ့ Aladinတစ္ေယာက္က နန္းေတာ္ထဲမွာေနရတာကိုၿငီးေငြ႕လာကာ တိုင္းေရးျပည္ေရးေတြလဲ စိတ္မဝင္စားတာေၾကာင့္ မင္းသမီး Shaillaက စိုးရိမ္ေနရပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ တိုင္းတစ္ပါးက မင္းသားတစ္ဦး Sha Zamanက Bagdadၿမိဳ႕ကိုေရာက္လာၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းယူၿပီး မင္းသမီး Shaillaရဲ႕လက္ထပ္ဖို႔အတြက္ Aladinကို လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေတာ့တယ္။ Aladinတစ္ေယာက္ ၿမိဳ႕နဲ႔မင္းသမီးကိုကယ္ဆယ္ဖို႔အတြက္ လူသားျဖစိသြားတဲ့ မီးခြက္ေစာင့္ဘီလူးကို ...
IMDB: 3.4/10 817 votes
The Brand New Adventures of Aladin (Alad 2) (2018)
Shadow in the Cloud (2020) ##unicode ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း မော့တ်ဂဲရက်ဟာအမျိုးသမီးလေတပ်အကူတပ်ဖွဲ့ကဖြစ်ပြီးတော့ တာဝန်အရဆာမိုအာကိုသွားတဲ့ Fool's errand လေယာဉ်ပေါ်ကိုလိုက်သွားရပါတယ် အမျိုးသမီးလေယာဉ်မှူးတွေကို သိပ်အထင်မကြီးကြတဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့ အလျောက် ဂဲရက်ကိုလည်းလေယာဉ်ပေါ်ပါတဲ့ ယောကျ်ားသားလေယာဉ်မှူးတွေတပ်သားတွေက လေယာဉ်ပေါ်ခေါ်တင်မသွားချင်ကြဘဲ ဂဲရက်ကိုလည်းလှောင်ပြောင်ရယ်မောကြပါတယ် လေယာဉ်သွားနေရင်းနဲ့ဂဲရက်ဟာထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတစ်ကောင်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ် လေယာဉ်ပေါ်ပါတဲ့သူတွေကိုအကြောင်းကြားပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့စကားကို မယုံကြည်ကြဘဲ ကြောက်လန့်ပြီးပြောနေတယ်လို့သာ ကောက်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ် လေယာဉ်ပေါ်မှာဂဲရက်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့သတ္တဝါကဘာများလဲ လေယာဉ်တစ်ခုလုံးကောအန္တရာယ်ကင်းနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုကြရမှာပါ ##zawgyi ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း ေမာ့တ္ဂဲရက္ဟာအမ်ိဳးသမီးေလတပ္အကူတပ္ဖြဲ႕ကျဖစ္ၿပီးေတာ့ တာဝန္အရဆာမိုအာကိုသြားတဲ့ Fool's errand ေလယာဥ္ေပၚကိုလိုက္သြားရပါတယ္ အမ်ိဳးသမီးေလယာဥ္မႉးေတြကို သိပ္အထင္မႀကီးၾကတဲ့ေခတ္ျဖစ္တဲ့ အေလ်ာက္ ဂဲရက္ကိုလည္းေလယာဥ္ေပၚပါတဲ့ ေယာက်္ားသားေလယာဥ္မႉးေတြတပ္သားေတြက ေလယာဥ္ေပၚေခၚတင္မသြားခ်င္ၾကဘဲ ဂဲရက္ကိုလည္းေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာၾကပါတယ္ ေလယာဥ္သြားေနရင္းနဲ႔ဂဲရက္ဟာထူးဆန္းတဲ့သတၱဝါတစ္ေကာင္ကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္ ေလယာဥ္ေပၚပါတဲ့သူေတြကိုအေၾကာင္းၾကားေပမယ့္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕စကားကို မယုံၾကည္ၾကဘဲ ေၾကာက္လန႔္ၿပီးေျပာေနတယ္လို႔သာ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္ ေလယာဥ္ေပၚမွာဂဲရက္ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့သတၱဝါကဘာမ်ားလဲ ေလယာဥ္တစ္ခုလုံးေကာအႏၲရာယ္ကင္းႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈၾကရမွာပါ Review – Phyu Sin File Size – 2.2GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Duration…1h 23min Genre :Action, Horror, War Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin,Myet Chel Encoded by Arrow
Pixie (2020) ##unicode ဒီကားလေးကတော့ ပစ်စီဆိုတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပေါ့။ ဇာတ်လမ်းစစချင်းမှာ ပစ်စီရဲ့ရည်းစားကောလင်းရယ် ဖေးဂတ်စ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရယ်က ဖာသာတွေမူးယစ်ဆေးအရောင်းအဝယ်လုပ်နေတဲ့ ဘုရားကျောင်းတစ်ခုကိုသွားပြီး ဖာသာတွေကိုသတ်၊ ဆေးတွေကိုယူလာခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တော့ ပစ်စီနဲ့ဖေးဂတ်စ်က ဆန်ဖရန်ဆစ္စကိုကိုထွက်ပြေးမှာကို ကောလင်းသိသွားပြီး ဖေးဂတ်စ်ကိုသတ်ပစ်လိုက်ပြီး ပစ်စီဆီကိုသွားရှာတယ်။ သူကပစ်စီအိမ်ရှေ့မှာ သေနတ်ကြီးတစ်ရမ်းရမ်းနဲ့ဆိုတော့ ပစ်စီကိုလာကြောင်တဲ့ကောင်လေး ၂ ယောက်က သူ့ကိုကားနဲ့တိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ သူတို့ ၂ ယောက်လည်း ကောလင်းကိုကားနောက်ဖုံးထဲထည့်ပြီးမှ မူးယစ်ဆေးတွေအပြည့်နဲ့အိတ်ကြီးကိုတွေ့ပြီးတော့ ရောင်းစားပြီးထွက်ပြေးဖို့ ကြံစည်ကြရော။ နောက်တစ်နေ့မှာ သူတို့ ၂ ယောက်စီကို ပစ်စီပါရောက်လာပြီး သူလည်းအတူပါမယ်လို့ပြောပြီး မူးယစ်ဆေးတစ်အိတ်နဲ့ သူတို့ ၃ ယောက်ဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်ကြမလဲ၊ ပစ်စီကရောဘာအကြံနဲ့ချဉ်းကပ်လာတာလဲဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။ ဒီကားလေးထဲမှာ ဇာတ်ကောင်တွေကို ချိတ်ဆက်ပြသွားတာလည်း အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်လို့နောင်တမရမယ့်ကားလေးတစ်ကားပါ။ ##zawgyi ဒီကားေလးကေတာ့ ပစ္စီဆိုတဲ့ ခပ္ဆိုးဆိုးေကာင္မေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းေပါ့။ ဇာတ္လမ္းစစခ်င္းမွာ ပစ္စီရဲ႕ရည္းစားေကာလင္းရယ္ ေဖးဂတ္စ္ဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ရယ္က ဖာသာေတြမူးယစ္ေဆးအေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုကိုသြားၿပီး ဖာသာေတြကိုသတ္၊ ေဆးေတြကိုယူလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ပစ္စီနဲ႔ေဖးဂတ္စ္က ဆန္ဖရန္ဆစၥကိုကိုထြက္ေျပးမွာကို ေကာလင္းသိသြားၿပီး ေဖးဂတ္စ္ကိုသတ္ပစ္လိုက္ၿပီး ပစ္စီဆီကိုသြားရွာတယ္။ သူကပစ္စီအိမ္ေရွ႕မွာ ေသနတ္ႀကီးတစ္ရမ္းရမ္းနဲ႔ဆိုေတာ့ ပစ္စီကိုလာေၾကာင္တဲ့ေကာင္ေလး ၂ ေယာက္က သူ႔ကိုကားနဲ႔တိုက္ပစ္လိုက္တယ္။ သူတို႔ ၂ ေယာက္လည္း ေကာလင္းကိုကားေနာက္ဖုံးထဲထည့္ၿပီးမွ ...
Shakeela (2020) ##unicode ဒီကားလေးကတော့ တစ်ချိန်တစ်ခါက နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အပြာကားမင်းသမီးတစ်ယောက်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ရှာကီးလာဟာ သာမန်တောရွာလေးက သရုပ်ဆောင်ဝါသနာပါတဲ့ ကောင်မလေးဘဝကနေ အပြာကားများတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း အခက်အခဲများစွာကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ပြီးဒိတ်ဒိတ်ကျဲအောင်မြင်တဲ့ ပုရိသတိုင်းရဲ့အသည်းစွဲမင်းသမီးလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ကျော်ကြားလာမှုနဲ့အတူ တစ်ဖက်မှာလည်း မနာလိုဝန်တိုသူများရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ခံစားလာရပါတော့တယ်။ အပြာမင်းသမီးဆိုတော့ တိုက်ခိုက်ရတာလည်း ပိုလွယ်ကူတာပေါ့။ သူမ အနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ။ အခက်အခဲတွေကိုရော ကျော်လွှားနိုင်ပါ့မလား။ india ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းအရာတွေအပြင် ရှာကီးလာရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုပါ စီးမျောရင်းကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ဒီကားေလးကေတာ့ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ အျပာကားမင္းသမီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားတာပါ။ ရွာကီးလာဟာ သာမန္ေတာ႐ြာေလးက သ႐ုပ္ေဆာင္ဝါသနာပါတဲ့ ေကာင္မေလးဘဝကေန အျပာကားမ်ားတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း အခက္အခဲမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးဒိတ္ဒိတ္က်ဲေအာင္ျမင္တဲ့ ပုရိသတိုင္းရဲ႕အသည္းစြဲမင္းသမီးေလးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ေက်ာ္ၾကားလာမႈနဲ႔အတူ တစ္ဖက္မွာလည္း မနာလိုဝန္တိုသူမ်ားရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ခံစားလာရပါေတာ့တယ္။ အျပာမင္းသမီးဆိုေတာ့ တိုက္ခိုက္ရတာလည္း ပိုလြယ္ကူတာေပါ့။ သူမ အေနနဲ႔တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ။ အခက္အခဲေတြကိုေရာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါ့မလား။ india ႐ုပ္ရွင္ေလာကရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကအေၾကာင္းအရာေတြအျပင္ ရွာကီးလာရဲ႕ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကိုပါ စီးေမ်ာရင္းၾကည့္ရႈရမယ့္ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ Review – Yue Liang File Size – 1.3GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Bio,Drama Subtitle ...
IMDB: 3.4/10 32 votes